Dr. Tint Swe's Writings: Burmese language ပြောင်လျှက်ဝင်းလျှက် ကျန်စေတည်း
စကားနဲ့စာဟာ လူတွေရဲ့အခြေခံအကျဆုံး အတတ်ပညာဖြစ်တယ်။ ဆက်သွယ်ရေးမှာ အပြောကနေစပြီး နောက်မှာ အရေးအသားနဲ့ စာဖြစ်လာတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ကောင်းမွန်တိုးတက်ကြွယ်ဝအောင် ကြိုးပမ်းကြတယ်။ တိုးတက်အောင်လုပ်သူရှိသလို ပျက်အောင်လုပ်သူလည်းရှိတယ်။ အဆုံးမှာ စေတနာမှန်သူကအနိုင်ရတယ်။ အတည့်ကိုရွဲ့အောင်လုပ်သူတွေဟာ တာရှည်မခံပါ။
ရေးတာတွေကတော့ အတော်ကိုများပြီ။ အခုမှတွေ့သူတွေကမေးကြတော့ (တစ်) ကနေပြန်စရအုန်းမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း အမည်ပါတာကို အခံရခက်သွားတဲ့သူတယောက်က ဟိုရေးသည်ရေးလုပ်လို့ ဘလော့လိုက်ရတယ်။ သူက ရခိုင်လူမျိုး ပညာရှင်တယောက်ကိုသာ အပြစ်တင်ထားတယ်။
ခေတ်အလျှောက်ပြောင်းတယ်ဆိုတာက ပိုလွယ်ပြီး မူရင်းအဓိပ္ပါယ်လည်းမပျက်အောင် မွမ်းမံတာဖြစ်တယ်။ ထပ်ဆင့် စာလုံးတွေ၊ ပါဠိ၊ ပါဠိပျက်၊ ပေါရာဏ၊ ဝေါဟာရနဲ့ သက္ကတစာလုံးတွေ နည်းစေတယ်။ တချို့စာလုံးတွေကတော့ နှမြောစရာကောင်းတယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာထုတ်တဲ့ စွယ်စုံကျမ်းအနှစ်ချုပ်တွေ၊ သတ်ပုံစာအုပ်တွေ၊ အဘိဓာန်တွေ၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေမှာတော့ (တစ်) တွေသာရိုက်နှိပ်ထားတယ်။ (တ) ကို (တစ်) လုပ်တာက မှားလို့ ပြင်တာမဟုတ်ဘဲ၊ ပိုခက်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ နမူနာ (၅) ခုသာ ပေးပါရစေ။
နမူနာ (၁) သြကာသဘုရားရှိခိုး၊ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁၅)၊ စာမျက်နှာ (၉၅) မှာ -
နမူနာ (၂) ပုဂံခေတ် နရပတိစည်သူ (၅၃၅-၅၇၂) ခေတ်မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ အနန္တသူရိယ အမျက်ဖြေလင်္ကာမှာ - သူတည်းတယောက် ကောင်းဘို့ရောက်မူ၊ တယောက်သူမှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက် = တစ်တွေမဟုတ်ပါ။
နမူနာ (၃) ဒုတိယမင်းခေါင် (၁၄၈ဝ-၁၅ဝ၁) လက်ထက် ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော် ရေးသားစီရင်တဲ့ လောကသာရပျို့မှာ -
ကြွက်သေတခုအရင်းပြု၍၊ ကြွယ်မှုတတ်ဆုံး၊ သေဋ္ဌေးထုံးကို၊ နှလုံးမူလျက်၊ ကြံစည်နက်ကို၊ သူ့ထက်လွန်ကဲ ကြိုးစေမင်း။ မှတ်ချက် = ကြွက်သေတစ်ခု မဟုတ်ပါ။
နမူနာ (၄) မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်ကနေ၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်ကနေ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မတိုင်ခင်အထိ ထုတ်သမျှ ဗမာနဲ့ မြန်မာငွေပိုက်ဆံတွေမှာ တကျပ်၊ ကျပ်တဆယ်၊ ကျပ်တရာလို့သာ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ချက် = ၁၈၇၂-၁၉၈၇ ကာလထုတ်ကနေစပြီး မြန်မာငွေပိုက်ဆံတွေမှာ တစ်တွေလုပ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာ (၅) ၄-၁-၁၉၄၈ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာ -
တသွေးတသား တမိဘ၊ ခြောက်ဆယ့်တနှစ်တလနှင့် တရက်သော၊ တမျိုးဘာသာ တစိတ်တဒေသ၏၊ တသွေးတသားတည်းဟူသော၊ မည်သူတဦးတယောက် တဖွဲ့တသင်း၏လို့သာရေးထားပါတယ်။
မှတ်ချက် = (တ) တွေကို (တစ်) နဲ့ (ပြီး) ကို (ပီး) လို့မရေးတာတွေကို သတိပြုစေလိုပါတယ်။
စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေထဲမှာလည်း တစ်နောက်လိုက်ကြသူတွေများတယ်။ ၂ဝ၁၄ မြန်မာစာအုပ်လောက စာအုပ်ထဲမှာ စာရေးဆရာ၊ အယ်ဒီတာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ လေ့လာသူ၊ ထုတ်ဝေသူ၊ ဖြန့်ချိသူတွေရဲ့စာတွေ အားလုံးထဲမှာ တစ်တွေချည်းသာ ဖတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သြကာသဘုရားရှိခိုး၊ အမျက်ဖြေလင်္ကာနဲ့ လောကသာရပျို့တွေ အာဂုံဆောင်ထားတာကိုတော့ သေသည်အထိ ဖျောက်ဖျက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါ။
- သင်သေသွားသော်၊ လူ့ပြည်လောက လူ့ဘဝကား၊ အိုရ နာရ သေရဦးမည် မှန်ပေသည်တည့်။
- သို့တပြီးကား သင်သေသွားသော်၊ သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့မြေသည် အခြေတိုးမြှင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏။
- သင်၏မျိုးသား စာစကားလည်း၊ ကြီးပွားတိုမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏။
- သင်ဦးချ၍ အမျှဝေရာ၊ စေတီသာနှင့်၊ သစ္စာအရောင် ဉာဏ်တန်ဆောင်လည်း၊ ပြောင်လျှက်ဝင်းလျှက် ကျန်စေတည်း။ (ဇော်ဂျီ)
1. Aphasia ဝဋ်လိုက်တတ်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/aphasia.html
2. Bad words ဖရုသဝါစာ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/bad-words.html
3. Banknotes say spelling was forced to change ပိုက်ဆံများကပြောသော မြန်မာသတ်ပုံအပြောင်းအလဲ (အပြောင်းအလွဲ) များ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/banknotes-say-spelling-was-forced-to.html
4. Buffalo ဤလား ကျွဲလား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/buffalo.html
5. Burmese Spelling မြန်မာသတ်ပုံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/burmese-spelling.html
6. Changes for the worse ပြင်တာတဲ့လား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/changes-for-worse.html
7. Correct me if … ရှေးကျတာ မှားသလား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/correct-me-if.html
8. Declaration of Independence of the Union of Burma လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/declaration-of-independence-of-union-of.html
9. Grammar and Spelling ဆရာတင်မိုး မှတ်ချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/grammar-and-spelling.html
10. Grammar and Spelling မြန်မာစာ သဒ္ဒါနဲ့ သတ်ပုံ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/grammar-and-spelling.html
11. Grammar တွေ့ရာကို ချိုဖြင့် လိုက်လံခတ်နေသော ဖိုးသာအောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/grammar.html
12. How to spell လွဲရင် မှားရော http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/how-to-spell.html
13. I beg your pardon ကန်တော့ပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/i-beg-your-pardon.html
14. Jealousy/Envy ဣဿာ/မရှုစိမ့် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/jealousyenvy.html
15. Language and lettering ဘာသာစကားနဲ့ စာအရေးအသား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/language-and-lettering.html
16. Lion spelling ခြင်္သေ့သတ်ပုံ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/lion-spelling.html
17. Mind your own language ကိုယ့်စာကိုယ်တန်ဖိုးထားပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/mind-your-own-language.html
18. Movies and TV ဓါတ်ရှင်နဲ့ တီဗွီကနေ သတ်ပုံသင်ပေးတယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/movies-and-tv.html
19. New Government တက် နဲ့ တတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/new-government.html
20. Not so correct မှန်သော်ငြား မှား၏ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/not-so-correct.html
21. Our language မြန်မာစာ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/our-language.html
22. Own language ကိုယ့်နိုင်ငံကစာ ကိုယ်တတ်ပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/our-language.html
23. Prospect of Myanmar language မြန်မာစကား အလားအလာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/prospect-of-myanmar-language.html
24. Slang ဗန်းစကား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/slang.html
25. Speech Disorders စကားပြောမူမမှန်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/speech-disorders.html
26. Spelling by force ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံ၊ အာဏာနဲ့တော့ ကပြောင်းကပြန် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/spelling-by-force.html
27. Spelling Comments (1) သတ်ပုံမှား ကွန်မင့်များ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/spelling-comments-1.html
28. Spelling Comments (2) သတ်ပုံမှား ကွန်မင့်များ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/spelling-comments-2.html
29. Spelling error မှားရေးမိတာလား၊ အမှားကိုအမှန်ထင်နေတာလား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/spelling-error.html
30. Spelling kills သတ်ပုံက တကယ်သတ်နေတယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/spelling-kills.html
31. Spelling suggestions သတ်ပုံအကြံပြုချက်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/spelling-suggestions.html
32. Spelling အစိုးရသတ်ပုံတော့ ပြောမနေနဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/spelling.html
33. Sweet words ဗမာလိုဗိုလ်လို နှုတ်ချိုချို http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/sweet-words.html
34. The Death ofaLanguage မြန်မာစာလှုပ်ရှားမှုလိုအပ်နေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/the-death-of-language.html
35. The End ပီ နဲ့ ပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/the-end.html
36. The middle way အလယ်အလတ်လမ်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/the-middle-way.html
37. The Truth သစ္စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/the-truth.html
38. Tit for tat (2) အလင်္ကာပန်းကုံး တ ကို တစ်လို့မသုံး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/tit-for-tat-2.html
39. Tit for tat (3) တစ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/tit-for-tat-3.html
40. Tit for tat အနန္တသူရိယ မှားသလား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/tit-for-tat.html
41. To my Burmese teachers ကျွန်ုပ်၏ မြန်မာစာဆရာများသို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/to-my-burmese-teachers.html